Ciidamada ammaanka oo toogtay dhagarqabe askari ku dilay Garasbaaley – Radio Muqdisho
Ciidamada ammaanka oo toogtay dhagarqabe askari ku dilay Garasbaaley
Afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan oo caawa warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey xubin ka tirsan agagixisada Al-Shabaab oo Makhribkii lagu toogtay deegaanka Garasbaaley, kadib markii uu dilay hal askari.
Afhayeenka ayaa sheegay in dilkaas uu dhacay intii lagu howlanaa afurka, wuxuuna ninka askariga dilay duubaayey muuqaal muujinaya sida uu u dhacaayo dilka askariga.
“Dhagarqabaha wuxuu watay kaamirad uu ku cadeynaayo askariga sooman ee uu dilay, sidoo kale wuxuu ku hadlaayey taleefoon, waana lagu hagaayey dilka askarigaas,” ayuu yiri Korneyl Cabdifitaax Aadan.
Goobta uu afhayeenku ku qabtay shirkaan jaraa’id ayaa lagu soo bandhigay meydka dhagarqabaha la toogtay ee ka tirsanaa Al-Shabaab iyo kaamiradii uu ku duubay askariga uu dilay oo ka tirsanaa ciidanka minishiibiyada.
“Waxaan uga digeynaa dhalinta Soomaaliyeed ee loo adeegsanayo inay dadka sooman dilaan xiligaan fadliga badan ee lagu guda jira bishaan barakeysa, waa idiin furan tahay gacanteena ee ka waantooba waxaas diin maahane,” ayuu hadalkiisa ku sii daray afhayeenka booliska Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya oo dalka ka cayrisay wakiilkii Midowga Afrika Francisco Madeira